Hait kohdetta . - Page 2 of 7 - Lastensuojelu.info
Salka badbaadada carruurta
Heshiiska guud ee xuquuqaha ay carruurtu leeyihiin
Waxqabadyada badbaadada carruurtu waxay ku salaysan yihiin sharciga
Danta ilmaha ayaa ugu muhiimsan
Ilmuhu wuu ka qaybqaadan karaa
Waalidiintu xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibaadyada saaran
Adeega reeraha carruurleyda
Xaggee caawimo laga raadsadaa?
Adeegyada Badbaadadda carruurta iyo arrimaha bulshada
Sidee baa ugu horayn qoyska loo caawiyaa?
Goormaa ilmaha lagu meelayaa meel kale oo aan gurigiisa ahayn?
Sidee baa loo fuliyaa la wareegidda iyo daryeelka ku meelgaarka ah?
Maxaa dhaca meelaynta ka dib?
Sheekooyin run ah
Hooyo keligeed ma kari karto
Qoyska oo dhan baa u baahan in la caawiyo
Da’ yar dhiban
La wareegidda waxaa lala diyaariyaa sida wadajir ah qoyska La wareegiddu waa borosees dheer oo sida caadiga ah si wadajir ah loola diyaariyo qoyska. Inta…
Haddii ilmihii ku aheyn gurigiisa ammaan ama nafsadiisa waxyeeleynayo, arrinkana uusan sinaba waxba ka qaban karin, markaas waxaa khasab noqonaysa, in ilmaha la geeyo meel kale oo lagu hayo oo aan gurigiisa ahayn. Middan waxaa la yiraahdaa meelayn kumeelgaar ah.
Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan Badanaa badbaadada carruurta waxaa la xiriirta cabsi ay dadku aaminsan yihiin,. Xaqiiqda se waxay tahay in la rabo in la…
Haddii ilmuhu ama reerku u baahan yahay kaalmo, adeega arrimaha bulshada ayey shaqadooda tahay iney caawiyaan. Caawimo iyo kaalmo ayaa diyaar leydinla yihiin in leydin siiyo waqti hore oo munaasib ah – intaan dhibtuba abuurmin.
Finland waxaa ka jira adeegyo badan oo caawiya qoysaska, adeegaasoo loogu talogaley dhammaan reeraha iyo carruurta kuwasoo ku nool Finland. Waxaa intaa dheer ood kaalmo ka heli kartaa adeega badbaadadda carruurta iyo – arrimaha bulshada, taasoo ugu danbeyntiina laguu sheegayo muhiimada.
Dhammaan waalidiinta wey jirtaa waqti ay kala kulmaan dhib barbaarinta carruurta. Inta badan dhibtaasi waa midey qoyska gudihiisa xaliyaan ama ama ehelku ka caawiyo. Finland arrimo bulshadeedka ayaa shaqadoodu tahay caawinta reerka iyo carruurta.
Qoyska khilaaf aad u weyn oo ka jira dartiis bay derisku boolis ugu yeereen. Arrinkii waxbaa laga qabtay oo xaalku wuu deggey. Khilaafka ku xigey kii hore wuu ka sii daran yahay. Hooyo iyadoo carruurtii wadata ayey u carartay guriga ammaanka. Iyadoo dhibaatooyinkii jiraan buu haddana qoysku rabaa, inay arrinkooda xalliyaan. Iyadoo wadahadallo la kaashanayo ayey waalidku barteen inay iskhilaafyadooda xalliyaan dagaal la’aan.
Qoysku wuxuu ka kooban yahay hooyo, aabbe iyo saddex wiil. Beryahan dambe wiilashu waxaa yeesheen dhibaatooyin badan. Waalidka waxaa loo soo jeediyey caawimada badbaadada carruurta, laakiin ma rabaan caawimadaas. Markii waalidka wadahadallo lala yeeshay ka dib bay ogolaadeen in la caawiyo. Iyadoo la kaashanayo badbaadada carruurta ayaa qof walba oo qoyska ka mid ah loo helay habab lagu taageero.
Hooyo iyadoo keligeed wadata lix carruur ah oo ay dhashay ayey timi Finland. Nolosha caadiga ah ee waddankan cusub waa mid adag, sidaas darteed hooyo way daashey. Shaqaalaha xannaanada welwel baa ku dhashay. Hooyo waxay ku dhiirigeliyeen inay caawimo ka dalbato qolada badbaadada carruurta. Shaqaalaha qoyska ayaa wuxuu bilaabay inuu qoyska gurigooda ugu yimaado oo hooyada ka caawiyo hawsha guriga iyo siday u qabsan lahayd arrimaha jira. Tartiib tartiib bay nolosha caadiga ah u noqotay mid sidii hore ka fiican.
Amal waa dhowr iyo toban jir, iyada iyo waalidkeedna marar badan buu muran dhexmaraa. Waalidku raalli kama aha siday Amal u dhaqmayso. Amalna raalli kama aha sida adag ee waalidkeed u edbiyaan. Khilaafyadu way ka sii dareen. Amal waxay u baxsatay guriga ammaanka dhallinyarada (nuorten turvatalo). Shaqaalaha guriga ammaanka ayaa Amal la hadlay oo qoyska oo dhan u qabanqaabiyey kulan. Arrimaha wadahadal ayaa lagu dhammeeyaa.